कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको दोस्रो दिनको मतगणना शुरु, हालसम्म कसले कति भोट ल्याए ? - Naya Pageकांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको दोस्रो दिनको मतगणना शुरु, हालसम्म कसले कति भोट ल्याए ? - Naya Page
कांग्रेस खुला केन्द्रीय सदस्यको दोस्रो दिनको मतगणना शुरु, हालसम्म कसले कति भोट ल्याए ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको खुलातर्फ दोस्रो दिनको मतगणना शुरु भएको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान पौने ११ बजेदेखि मतगणना शुरु भएको हो । काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत आइतबार भएको निर्वाचनको मतगणना अझै जारी रहेको छ ।
खुला केन्द्रीय सदस्यतर्फ ९९ जना प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भने त्यसमध्ये ३५ जना निर्वाचित हुन्छन् । शनिबार रातिसम्म २,३९३ मतपत्र गणना सकिएको थियो । आजदेखि बाँकी मतगणना हुनेछ । मतगणनाअनुसार शशांक कोइरालाको सबैभन्दा धेरै मत रहेको छ । डा. शशांक कोइराला १,९७१ मतका साथ सबैभन्दा अगाडि छन् ।
उनलाई एनपी साउदले पच्छ्याइरहेका छन् । रातिसम्मको नतिजाअनुसार साउदले १,५३८ मत पाएका छन् । उनीपछि गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँणले १,५०७ मत ल्याएका छन् । देउवा निकट अर्का नेता रमेश लेखकले १,४५१ मत ल्याएका छन् ।
खाँण पनि देउवा प्यानलबाट महामन्त्रीका दाबेदार थिए । तर कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको तालमेलले साउद र खाँणहरु पछि हट्नुपरेको थियो । सञ्चारमन्त्री समेत रहेका देउवा निकट अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले १,४२३ मत ल्याएका छन् । अर्कातिर नेता शंकर भण्डारीले पनि १,४३७ मत ल्याएका छन् । यस्तै रामहरि खतिवडाले पनि १३९५ ल्याएका छन् । उदय शमशेर जबराले १,४४५ र अर्जुननरसिंह केसीले पनि १,३८३ मत ल्याएका छन् ।
शनिबार रातिसम्मको नतिजा (टप ४५ सम्म)
१) अजयबाबु शिवाकोटी- ९०९
२) अर्जुननरसिंह केसी- १३८३
३) उदय शमशेर राणा -१४४५
४) एनपी साउद-१५३८
५) उमेशजंग रायमाझी-८९१
६) कुन्दनराज काफ्ले-११४३
७) कृष्णकिशोर घिमिरे-९२९
८) केदार कार्की-८१९
९) गंगाधर तिवारी-७६२
१०) गणेश लामा-८८८
११) गुरु बराल-१०३६
१२) गोपालमान श्रेष्ठ -१३२३
१३) गोपाल दहित-९३१
१४) गोविन्द भट्टराई-१२७७
१५) गोविन्द राज पोखरेल-९६२
१६) जीतजङ्ग बस्नेत-१२८३
१७) जिप छिरिङ्ग लामा-१३१२
१८) दिनेश कोइराला -९२५
१९) दीपक गिरी-११७४
२०) दिलेन्द्र प्रसाद बडू-१२३१
२१) नैनसिंह महर-१२८३
२२) पद्मनारायण चौधरी-११३७
२३) बल बहादुर केसी-१२३३
२४) बालकृष्ण खाँण-१५०७
२५) मंगलप्रसाद थारु- ८७१
२६) मदनबहादुर अमात्य- ९०८
२७) मनोजमणि आचार्य-८५४
२८) ई. मोहन आचार्य-९१३
२९) मोहनबहादुर बस्नेत-१२०२
३०) यज्ञबहादुर थापा-८००
३१) रमेश लेखक-१४५१
३२) डा.रामशरण महत-१२८१
३३) राजीव ढुंगाना-९३५
३४) रामहरि खतिवडा-१३९५
३५) वीरेन्द्रकुमार कनौडिया-९१९
३६) शंकर भण्डारी-१४३७
३७) शम्भुलाल श्रेष्ठ-७९१
३८) सञ्जयकुमार गौतम-१००१
३९) सुनिलबहादुर थापा-१२४६
४०) डा.शशांक कोइराला-१९७१
४१) सुरेन्द्रराज पाण्डे-११५१
४२ हरिप्रसाद नेपाल-७८७
४३) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की-१४२३
४४) जनकराज गिरी-७४४
४५) तीर्थराज खनियाँ-७८०